Lathe Machine Nhanganyaya: 16 Mhando dzeLathe Machine - TSINFA
Lathe ndeimwe yemichina inoshandiswa zvakanyanya mumunda wesimbi yekugadzirisa. Kune mhando dzakasiyana dzemuchina maturusi. Zvakaoma kune vanhu vasingazive iyi indasitiri kujekesa musiyano uripo pakati pemhando dzakasiyana dzemuchina maturusi. Mune ino bepa, isu tinopatsanura kubva ku6 sub-masystem: control mode, muchina chimiro, kushandiswa, kugadzirisa zvinhu, huwandu hwevabati vezvishandiso, mhando yemuchina zvikamu. Kunyangwe akasiyana marudzi emazita e lathe, pane macross kesi, senge gap mubhedha lathe muchina zvakare une yakatwasuka lathe, pombi tambo lathe zvakare ineCNC lathe muchina, asi hazvikanganisa manzwisisiro atinoita lathe.
Mhando dze lathe muchina sumo:
Zvinoenderana nemaitiro ekudzora
Zvinoenderana nemuchina chimiro
Slant mubhedha lathe
Zvinoenderana nechinangwa chemuchina
Crankshaft lathe, camshaft lathe, wheel lathe, axle lathe, roll lathe uye ingot lathe, kutendeuka uye yekugaya muchina chishandiso, wheelet lathe, pombi tambo lathe
Zvinoenderana nezvinhu zvakagadziriswa
Simbi yekucheka lathe
Yakapatsanurwa nenhamba yevanobata maturusi
Yega mudziyo wekubata CNC lathe, kaviri chishandiso mubati CNC lathe
Yakarongedzwa neyekutanga mhando yezvigadzirwa zvemuchina
Chuck mhando CNC lathe, yepamusoro CNC lathe
Parizvino, pane nzira mbiri dzekudzora dzedanda, imwe inodzora nemaoko, uye imwe ndeye CNC yekugadzirisa zvirongwa. Maererano siyana kuzvidzora nzira, lathe iri rakakamurwa kwakajairika lathe uye CNC lathe.
Iyo yakajairwa lathe ine yakafararira yekugadzirisa chinhu, iyo yekugadzirisa renji yeiyo chokurukisa kutenderera kumhanya uye huwandu hwekudya hwakakura. Iyo yemukati neyekunze nzvimbo, kumeso kumeso, uye zvemukati uye zvekunze tambo dzebasa rinogadziriswa. Rudzi urwu rwe lathe runonyanya kushandiswa nemaoko nemushandi. Zviri nyore kushanda. Muchikamu chekutanga, kumhanya kunogadziridzwa, giya rinofambiswa, lever yekutanga inosimudzwa, uyezve joystick inosundidzirwa kumberi. Chishandiso chinotenderera chinofambira mberi, yekumashure inodhonza, chishandiso chekutendeuka chinodzokera kuruboshwe, uye chishandiso chekutendeuka chinoenda kuruboshwe. Kuruboshwe uye kurudyi zvakafanana. Kunyangwe iko kushanda kweyakajairika mota kuri nyore, kugadziriswa kwezvikamu chiitiko chehunyanzvi, uye vashandi vachatarisa ekuyera maturusi uye madhirowa ekugadzirisa. Kana uchicheka zvidimbu zvidimbu zvezvikamu, zvakajairika lathes zvine hukuru hunobudirira mukana kupfuura CNClathe muchina. Kazhinji kazhinji general-chinangwa lathes dzakagadziriswa, uye CNC lathes dzichiri muchikamu chehurongwa. Nekuda kwechinhu ichi, yakajairwa lathe ichine musika, inokodzera imwechete-chidimbu, diki batch kugadzirwa uye yekuchengetedza mashopu.
Aya ma lathes anogona kuganhurwa kuita akasiyana akasiyana echinyakare matinji eakasiyana maratidziro, senge LT6232 uye LT6250, zvichienderana nepakati kureba uye nzvimbo yepakati. Pamusoro pekushandura mhando dzese dzenzvimbo dzekutenderera, vanogona zvakare kushandura tambo dzakasiyana, senge metric tambo, inch tambo, modulus tambo, diametric tambo uye yekupedzisira tambo.
Kuti uvandudze dhayamita yekugadzirisa yeiyo yakajairwa lathe, gaba yemubhedha lathe yakave yakatorwa (inonziwo saddle lathe).
Kuruboshwe kwekupedzisira kwemubhedha wepamberi kumberi kwebhokisi remusoro kwakanyudzwa uye kunogona kutora zvikamu zvakakura zvehupamhi. Chimiro che lathe iyi chine misoro miviri kumusoro, chakadzika pakati, uye chinotaridzika sechigaro chechigaro, saka chinonzi chigaro chechigaro. Chigaro lathe yakakodzera machine zvikamu makuru TOUR kukura uye diki axial kukura. Inokodzera kutenderedza denderedzwa rekunze, gomba remukati, kumeso kumeso, slot uye metric, inch, modulus, warp tambo, uye kuchera uye kufinha. , reaming uye mamwe maitiro, kunyanya akakodzera kune imwechete-chidimbu, batch yekugadzira mabhizinesi. Chigaro lathe inogona kugadzirisa yakakura dhayamita workpieces mune yechigaro paburi. Iwo mashini ekushandisa maturu akaomeswa uye akatsetseka pasi kuitira nyore uye kuvimbika mashandiro. Iyo lathe ine hunhu hwesimba rakakwira, kumhanya kwazvo, kuomarara kwakasimba, kunyatsoita uye ruzha rwakaderera.
Iyo CNC lathe inogadzirwa kubva kune iyo lathe, uye chirongwa chekudzora chirongwa chinowedzerwa kumushini mukuru. Iyo purogiramu inodzorwa nechirongwa kudzora muchina kuti uite mashandiro zvinoenderana nenzira yakatarwa, uchipedzisa kutenderera kwese kuita kwemuchina.
Kufanana neyakajairwa lathes, CNC lathes inoshandiswawo kumachina iyo inotenderera pamusoro pezvikamu. Kazhinji, inogona kupedzisa iyo yekunze yekunze cylindrical pamusoro, iyo conical pamusoro, iyo idenderedzwa pamusoro uye tambo, uye inogona zvakare kugadzirisa zvimwe zvakaoma zvinotenderera zvimiro, senge hyperboloids. Zvishandiso zve lathe uye zvakajairwa lathe zvakaiswa nenzira imwecheteyo. Kuti uvandudze mashandiro ekugadzirisa, iwo hydraulic lathes anowanzoita hydraulic, pneumatic uye emagetsi chucks.
Chimiro cheCNC lathe chakafanana neicho cheyakajairwa lathe, ndiko kuti, inoumbwa nemubhedha, musoro wemusoro, chigadziri chemidziyo, inosimbisa sisitimu yekumanikidza system, inotonhorera uye girisi. Iyo yekudyisa sisitimu yeCCC lathe ine hunhu hwakasiyana neyakajairwa lathe. Iyo yakajairika lathe ine yekudya bhokisi uye yekutsinhana inotakura. Iyo CNC lathe inoshandisa zvakananga servo mota kutyaira iyo slide uye chishandiso mubati kuburikidza nebhora sikuruu kuti uone iyo yekufambisa yekufamba. Maumbirwo e feed system akareruka kwazvo.
Yemazuva ano CNC lathes dzakatove dzakakurumbira kune microcomputer control. Ikozvino pane zvikamu zviviri zveCNC lathes, imwe yacho iri nyore microcomputer-inodzorwa muchina chishandiso, uye imwe yacho komputa-inodzorwa muchina chishandiso. Munguva yekushanda, iyo CNC lathe inoita masvomhu zvinoenderana neyekuisa chirongwa chirongwa uye inopinza iyo yekuverenga mhedzisiro kune yekutyaira unit. Iyo yekudhiraivha dhiraivhu inoita kuverenga sekuraira, inopinza iyo yekuverenga mhedzisiro kune yekutyaira kifaa, inodzora iyo yekutyaira mudziyo (inofambisa mota) iri pakati peiyo dhiraivhu dhiraivhiti mechina kutapurirana mechina, uye inoshandisa inoshanda danho rinoshanda remuchina chishandiso (chenguva refu uye chakatwasuka chingoro) kuti uone iyo yekucheka inofamba.
Chinhu chikuru cheiyo yakatwasuka lathe ndeyekuti iyo huru axis yakafanana nebhenji rebasa uye rinotaridzika kunge rakarara pasi. Horizontal lathes inokodzera kugadzirisa zvakapusa workpieces ayo asina kukura muhupamhi asi akareba. Izvi zvinodaro nekuti yakatsemuka lathe inogadziriswa neiyo chuck uye yepamusoro pamusoro peiyo workpiece. Ichi chimiro chinogadza kuti huremu hweiyo yekushandira haigone kuve yakakura kwazvo. Iyo yakajairwa yepamusoro mutoro ndeye 300 kg, uye iyo inorema-basa lathe inogona kutakura 1 tani. Iyo yekugadzirisa kureba ndicho chakanakira mukana weiyo yakatwasuka lathe inoenderana neiyo yakatwasuka lathe.
Iyo yekugadzirisa kureba ndeye 750mm, 1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm kana kunyangwe 8000mm, nezvimwe.
Chinhu chikuru cheiyo lathe yakatwasuka ndeyekuti chokurukisa chakanangana netafura uye chekushandira chakanamatira patafura. Iyo yakatwasuka lathe yakakodzera yekugadzirisa inorema workpieces ine hombe dhayamita uye ipfupi kureba. Izvi zvinodaro nekuti pane yakatwasuka lathe, iyo yekunamatira uye kuumbana kwezvikamu zviri nyore, uye gwara rinotenderera pakati pebasa uye chigadziko rine zvirinani kutakura kugona. Iko kutsetseka kwekufamba panguva yebasa kwakakwirira, saka iko kwekugadzirisa mhando kwezvikamu zvakakwirira, asi mhando yezvikamu izvi inonetsa kuvimbisa kana yaiswa pane zvakajairwa materu uye ekupedzisira materu.
Vertical lathes inogona kukamurwa kuita imwechete-ikholamu yakatwasuka lathes uye kaviri-ikholamu yakatwasuka lathes. Imwe-ikholamu yakatwasuka lathes inowanzove neyakagadzika mudziyo wekubata uye yeparutivi mudziyo wekubata. Vaviri vanobata vane akasiyana emabhokisi ezvipfuwo ayo anogona kuvhenekwa ega kana panguva imwe chete kutwasuka uye kwakatwasuka kupfuura. Makuru akatwasuka materu anowanzo kuve nemasimudziro maviri. Kuti zvive nyore kugadzirisa, iwo maviri-ikholamu akatwasuka lathe kazhinji ane maviri ekumira ekushandisa maturusi uye rimwe divi rekushandisa mudziyo. Iyo hombe-posita ine mubato wedivi pane yega yekoramu mbiri.
Iyo inoteedzera njanji dhizaini inobvumira iyo lathe kuti iome zvakanyanya uye nyore kubvisa machipisi.
Crankshaft lathes, vhiri lathes, rwakapetwa lathes uye ingot lathes, anotendeuka uye azvikuya muchina maturusi, pombi shinda lathes.
A Crankshaft lathe ndeye yakasarudzika mhando ye lathe inoshandiswa kumisikidza iyo yekubatanidza tsvimbo yemutsipa uye neka crank ruoko divi remukati kupisa injini uye nemhepo compressor crankshaft.
Iyo CNC vhiri lathe
Iyo CNC vhiri lathe yakasarudzika muchina chishandiso chekugadzira uye kugadzirisa vhiri maviri maviri echitima michina. Kuti uvandudze mashandiro uye mutengo wemutengo wechishina chishandiso, iyo CNC system yeakaviri maturusi edhivhiri vhiri lathe yakagadziridzwa, uye otomatiki kuyera, chishandiso kumisikidza uye zvehupfumi kucheka mabasa eCNC system zvakakurukurwa. Iyo yakakwana otomatiki machining oparesheni modhi, uye yakashongedzerwa ne otomatiki yekuyera system, iyo inoerekana yaverenga iyo yakanakisa yekucheka parameter mushure mekuyera pamusoro pekutsika pamusoro pevhiri rinofanira kugadziriswa.
Roll lathes ndeyeti lathes yakagadzirirwa kugadzirisa rolls. Iwo ma rolls anowanzo kuve mabhanzi anoshandiswa pane iyo inotenderera chigayo. Iyo yakakura kwazvo, inorema uye inorema cylindrical chimiro ine grooves pairi.
Turning uye azvikuya muchina
Kutendeuka uyeKwose azvikuya muchinachishandiso chinoumbwa nemuchina ndeimwe yeanonyanya kufarirwa machining maitiro munyika yehunyanzvi. Icho chigadzirwa chemberi chekugadzira. Composite machining iko kuiswa kweakawanda akasiyana machining maitiro pane mumwe muchina. KugayaKuchera, wekushandura muchina. Composite kugadzira ndiyo yakanyanya kushandiswa uye yakanyanya kuoma musanganiswa wekutendeuka nekugaya. Yekutendeuka uye yekugaya yakasanganiswa machining centre yakaenzana nemubatanidzwa weCNC lathe uye nzvimbo yekutengesa.
Pipe shinda lathe
Pipe tambo lathe, inozivikanwawo sepombi tambo lathe, yakatwasuka lathe yakagadzirirwa kushandura yakakura-dhayamita pombi fittings. Inoratidzira hombe dhayamita yeiyo shaft huru (kazhinji 135mm kana kupfuura) uye chuck kumberi nekumashure kwebhokisi rekuruka. Kuitira kuti zviite clamping uye kubudiswa hombe-dhayamita mutopota Fittings kana nembariro, chigadzirwa iri zvinowanzoshandiswa zvemaziso kugadzira michini kugadzira, peturu, makemikari, marasha, Geological ubanguranyika, mumaguta mvura wedzera uye abudise maindasitiri.
Iyo simbi yekucheka mota yakafanana neyekuveza mota mune iyo inoshandiswa kucheka iyo yekushandira nekutenderera iyo yekushandira mukubatana nechombo.
Nekudaro, mutsauko uripo pakati pezviviri zvakare wakakura:
Maumbirwo emubati webanga akasiyana. Woodworking mota dzinonyanya kuchinjika. Semuenzaniso, kushandisa simbi yekucheka lathe kutyaira vhasi, kufambisa chishandiso kuimisa kunogona kunge kusinganakidzi.
Hunhu hweiyo workpiece hwakasiyana. Iyo yekushandira yemotokari yesimbi inowanzoenderana, uye kuwanda uye kuomarara zvinoramba zvakangofanana, saka inogona kutemwa 3mm panguva, uye chishandiso chinogona kutamiswa choga. Kana huni ikashandiswa nenzira iyi, huni dzinoshatirwa uye kunyange huni dzinobvaruka. Iyo mota hardwood simbi yekucheka mota iri nani.
Maturusi ekushandura akasiyana. Iyo yekucheka kumucheto kwechinoshandura chishandiso haina kufanana neiyo kona.
Chuck mhando CNC lathes
Aya ma lathes haana muswe muswe uye akakodzera kutendeuka ma disc (kusanganisira mapfupi mapfumo). Mazhinji enzira dzekuchinjisa ndedzemagetsi kana hydraulic control, uye iyo chuck mamiriro ine akawanda anogadziriswa shaya kana asiri-anodzima shaya (kureva, akapfava shaya).
Wepamusoro CNC Lathes
Aya ma lathes akagadzirwa neakajairwa muswe kana CNC muswe. Ivo akakodzera kutendeuka marefu mativi uye disc zvikamu zvine diki dhayamita.
Uye zvakare, zvinogona kuve zvakasiyana maererano nekugadzirisa kwayo kurongeka
Iyo lathe yakakamurwa kuita general lathe, chaiyo lathe uye yepamusoro-chaiyo lathe. Precision uye yakakwira-chaiyo lathes inowanzo kuve yakavakirwa pane zvakajairika chaiyo lathes. Nekunatsiridza iyo geometric kunyatso kwemuchina, kudzikisira mhedzisiro yekudengenyeka uye kupisa masosi, uye kushandisa yakakwira-kuita mabheyaringi, muchina une yakakwira machining kunyatso.
Chero mibvunzo ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Bata Redu Rutsigiro Chikwata